लेवान्डोस्कीले तोड्लान रोनाल्डोको रेकर्ड ! - सबै खेल
लेवान्डोस्कीले तोड्लान रोनाल्डोको रेकर्ड !
२७ श्रावण २०७७, मंगलवार १२:१२ August 11, 20200Comments Byern Munich, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski
जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखका पोसिन स्ट्राइकर रोबर्टो लेवान्डोवस्की यो सिजन निकै उत्कृष्ट फर्ममा रहेका छन् । उनको बायर्न म्युनिख युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल पनि पुगिसकेको छ । तर, उनी के मान्छन् भने उनको नजर क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कीर्तिमानमा छैन ।
पोल्यान्डका ३१ वर्षीय स्ट्राइकरले चेल्सीमाथि सप्ताहन्तमा प्राप्त जितमा दुई गोल गरे । यससँगै बायर्नले चेल्सीमाथि समग्रमा ७–१ को ठूलो अन्तरको जित निकाल्न सफल रहेको थियो । यसपल्ट च्याम्पियन्स लिगमा खेलेका सात खेलमा उनले १३ गोल गरिसकेका छन् ।
अब उनी रोनाल्डोको त्यो कीर्तिमान नजिक छन्, जुन सिजन पोर्चुगाली खेलाडीले सन् २०१३–२०१४ को सिजनमा रियल म्याड्रिड एक्लैका लागि १७ गोल गरेका थिए । यदि बायर्नले लिस्बनमा हुने फाइनलको यात्रा गर्छ भने अझै तीन खेल खेल्नेछ र यिनै खेलमा लेवान्डोवस्कीसामु रोनाल्डोको कीर्तिमान भंग गर्ने अवसर हुनेछ ।
लेवान्डोवस्की भन्छन्, ‘यो कीर्तिमान उछिन्ने मेरो उद्देश्य होइन । हामीले अझै नकआउट चरणका केही खेल खेल्ने छौं र यसमा सकेसम्म बढी गोल गर्न सफल रह्यौ भने त्यो मेरो लागि खुसी हुनेछ ।’
लेवान्डोवस्की एकै सिजन कोही खेलाडीले सबैभन्दा बढी गोल गर्ने कीर्तिमानको नजिक भएपनि समग्रमा रोनाल्डोले प्रतियोगितामा गरेको गोल संख्या भन्दा धेरै पछाडि छन् । रोनाल्डो च्याम्पियन्स लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी हुन् र उनले १ सय ३० गोल गरिसकेका छन्, लेवान्डोवस्की भने चौथो स्थानमा छन्, रोनाल्डोको भन्दा ६४ गोलले पछाडि ।
पहिलो लेगमा उनले एक गोल गरे र अर्को दुई गोलमा सहयोगी भूमिका निभाए । दोस्रो लेगमा उनले दुई गोल गरे र दुई अवसरमा गोलको अवसर सिर्जना गरे । त्यसको अर्थ बायर्नका सात गोलमध्ये सबैमा उनको भूमिका रह्यो ।
← सान्चो १ सिजन डर्टमन्डमै रहने
अनु र नवीनको ओलम्पिक तयारी स्थगित →
शीर्ष स्थानको लिभरपुल रोकियो
४ कार्तिक २०७६, सोमबार १५:४९ 0
एकैदिन पुलिसका २ खेल, एउटामा जित, अर्कोमा हार
१५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १८:५० 0
श्रीलंकालाई हराउँदै भुटान फाइलनमा
२२ मंसिर २०७६, आईतवार ००:२८ 0